ကျွန်တော်ချစ်သောသူငယ်ချင်းများ: 2007-09 for all my lovely friends
အစ | ယခင်စာများ
...: ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ စာပေ၊ နည်းပညာ၊ အိုင်တီ၊ ကူးယူရန်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များနဲ့ အခြားနေရာများကို ဒီနေရာလေးကနေ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် :...
... BE PEACEFUL AND HAPPY ALL THE MOMENTS, ALL MY FRIENDS ...
Online Dhamma Tayardaw MP3 Listen & Download
Love Songs - အချစ်သီချင်းများ
Foreign Songs - နိုင်ငံခြား သီချင်းများ
Online Music Player - မြန်မာသီချင်းများ
.:|:. ရွှေပါရမီ .:|:. ဓမ္မစာအုပ်များ (၂၈၄အုပ်) (Dhamma Web).:|:. တရားတော်များ (၂၅၁၀ပုဒ်) (Dhamma Web) .:|:.
.:|:. မြန်မာသူငယ်ချင်းများ .:|:. မြန်မာမိသားစု .:|:. mysteryzillion .:|:. RAVEN သွေးလှူရှင်များ အဖွဲ့ .:|:. Health Education .:|:. ဂန္ထ၀င်မြန်မာ .:|:.အိပ်မက်များ.:|:. လစဉ်ဗေဒင်.:|:.
.:|:. ကိုမောင်လှ .:|:. ကိုညီလင်းဆက် .:|:. ကိုစေတန် .:|:. ကိုရဲနောင် .:|:. ကိုချမ်းမြစိုး .:|:. ကိုစန်းဦး .:|:. ကိုစိုးဇေယျ .:|:. ကိုမျိုးအောင် .:|:. ကိုမျိုးကျော်ထွန်း .:|:. ကိုမင်းကျော် .:|:. I Hack Stuff .:|:.Technorati-Top .:|:.
.:|:. Today မီဒီယာအုပ်စု .:|:. Weekly Eleven ဂျာနယ် .:|:. မြန်မာတိုင်း-အင်္ဂလိပ် .:|:. မြန်မာတိုင်း - မြန်မာ .:|:.
.:|:. ကာနယ်ဂီမယ်လွန် .:|:. အမ်.အိုင်.တီ .:|:. LearningSpace .:|:. IEC .:|:.
.:|:. မြန်မာ e-Library .:|:. အင်္ဂလိပ် - အင်္ဂလိပ် / မြန်မာ အဘိဓါန် .:|:. MS Encarta .:|:. အခမဲ့အင်တာနက် စွယ်စုံကျမ်း .:|:. CGI Security .:|:. Webopedia .:|:.
.:|:. အားလုံးအတွက်ဒေါင်းလုဒ် .:|:. ဆောဖ့်တက်စ် မီဂါနက် .:|:. မိုဘိုင်း/ ပေါ့ကက်ပီစီ(၁) .:|:. မိုဘိုင်း/ ပေါ့ကက်ပီစီ(၂) .:|:. မိုဘိုင်း/ ပေါ့ကက်ပီစီ(၃) .:|:.
မှတ်စုနှင့် စာအုပ်များ (၁၃)
သီချင်းလေးတွေစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နားထောင်နိုင်အောင်လို့ပါ . . ကြိုက်တာရွေးပြီး စပီကာပုံလေးကိုကလစ်လုပ်ရုံပါပဲ . . သိမ်းထားချင်ရင်တော့
Right-click --> Download နဲ့ ယူသွားလို့ရပါတယ် ...
. . ပြောချင်တာလေးများရှိရင် . .
“.: GTalk ပရိုဂရမ်ကို သုံးမရဖြစ်နေလို့ GMail ကနေ Chat နေရတဲ့ ရောင်းရင်းများအတွက် ဒီGTalk လေးကို စမ်းကြည့်ပါ ... ;):.”
အခြားသော အွန်လိုင်း မီဒီယာတွေက နှစ်သက်မိတဲ့ စာစုလေးတွေကို ဝေငှပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်...
အားလုံး ကူးချထားတာ မဟုတ်ဘဲ မူရင်းနေရာကို ပြန်ညွှန်းပေးထားတာမို့ ပိုင်ရှင်များ အနေနဲ့ ခွင့်ပြုနိုင် မယ်လို့မျှော်လင့် မိပါတယ် ...
~~~~ ကောက်နှုတ်ချက်များ ~~~
အောင်မြင်တဲ့ ဘလော့ဂါ တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပို့စ်တွေ ရေးရမလဲ.
၁. စာဖတ်ရမယ်၊ ဗဟုသုတလေ့လာဆည်းပူးရမယ်။
၂. ဘလော့ဂ်ရေးတာကို အမှန်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားရမယ်။
၃. သင့်တော်တဲ့ အချိန်တစ်ခုကို ခွဲဝေပေးနိုင်ရမယ်။
၄. မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအသစ်တွေ ရယူလိုစိတ်ရှိရမယ်။
၅. ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို နိုင်နင်းရမယ်၊ ရိုးသားရမယ်။
အဲဒီ့လောက် ဆိုရင် ခင်ဗျားမှာ ဘလော့ဂါကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း တွေရှိ လာပါပြီ. သတိထားမိလား. ဘာတွေ ရေးရမယ်လို့ ကျွန်တော်ဘာမှ ထည့်မပြော သွားဘူးနော်. ကျွန်တော် ပြောသွားတာက ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အကြောင်းတွေပဲ.
ဟုတ်တယ်. အဲဒီ့ အချက်တွေကို လိုက်နာနိုင်ရင် ခင်ဗျားဟာ ဘလော့ဂ် မရေးဘဲနဲ့တောင်...
အောင်မြင်တဲ့ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့...၊ ကိုရန်အောင် အသေးစိတ် ဖတ်မယ်ဆိုရင်
... ကျွန်တော်ဟာ ဒီအီးလိုက်ဘရီကြီး စလုပ်နေပြီ ကြားကတည်းက အတော်ဝမ်းသာ ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားက မြန်မာတွေ အနေနဲ့ မြန်မာစာအုပ် တွေကို အွန်လိုင်းကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ ပိုက်ဆံ မကုန်ဘဲ ဖတ်နိုင် တော့မယ်ပေါ့။ အဲဒီလို သတင်း ကြားရတာ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်လောက် ရှိမယ် ထင်ပါရဲ့၊ တလောက မြန်မာ့ အီးလိုက် ဘရီကြီး အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ် နိုင်ခဲ့တာကို တွေ့လိုက် ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အားရ၀မ်းသာ အင်တာနက် ကဖီးကနေ အချိန်ကုန်ခံပြီး သွားရောက် လေ့လာ လည်ပတ်ဖြစ်ခဲ့ ပါတော့တယ်။ အရင်က မြန်မာ အီးလိုက် ဘရီမှာ လူတိုင်း လူတိုင်း အခမဲ့ ၀င်ပြီး ဖိုင်တွေကို ရယူနိုင်တယ်။ အခုကတော့ မန်ဘာကြေးတွေ ဘာတွေ သွင်းပြီးမှ ....
မြန်မာအွန်လိုင်းလိုက်ဘရီ ၊ ကိုညီလင်းဆက်
လောက၏သဘော (The Nature of The World)
ရပ်နီးရပ်ဝေးက မြင်ဖူး၊ မမြင်ဖူးတဲ့ ညီအကို၊ မောင်နှမ၊ သူငယ်ချင်းများအတွက်..
၁၃၆၉ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က နာကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်တစ်ပုဒ်ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ..
“သီတဂူဆရာတော်ကြီး အရှင်ဥာဏိဿရ” ဟောကြားတော်မူတဲ့
“လောက၏သဘော” တရားတော်ပါ...အကြောင်းအရာ အချို့ကို ထုတ်နှုတ် ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ...
အောက်ဘက်မှာ တရားတော် ကို ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်တဲ့နေရာလည်း ပေးထားပါတယ်...
ဖတ်ရှု နာယူကြည့်ကြပါ သူငယ်ချင်းများ...
The Nature of The World
သတ္တ္တလောက၊ သြကာသလောက၊ သင်္ခါရလောက ဟူ၍လောက သုံးမျိုးရှိသည်...
လောက၏ အဓိပ္ပါယ် = ပျက်စီးခြင်း
လောကုတ္တရာ၏ အဓိပ္ပါယ် = ပျက်စီးခြင်းမှ လွန်မြောက်ခြင်း အဆက်မပြတ်ပျက်စီးနေသော လောကကို လွန်မြောက်ခြင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြီး
အနည်းဆုံးလေးခု - ဒါန၊ သီလ၊ သမထ၊ ၀ိပဿနာ - ကို လုပ်ပါ
ကောင်းမှုလေးမျိုး ဘာပဲလုပ်လုပ် ရည်ရွယ်ချက် မပျောက်စေနဲ့ ...
ဘာကို ရည်ရွယ်ရမလဲဆိုတော့ လောကုတ္တရာကို ရည်ရွယ်ရမယ်...
ပျက်စီးခြင်းကို လွန်မြောက်အောင် ရည်ရွယ်ရမယ်...
"ပျက်စီးနေတဲ့ သဘော ထပ်ခါ တလဲလဲပျက်စီးနေတာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပျက်စီးနေတာ လောက"
စီးပွားရေးလောက - ပျက်စီးနေတယ်
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ တကယ်ရော ဘာသာရေး အဆုံးအမတွေအတိုင်း လိုက်နာကြသေးရဲ့လား..
ဘာသာရေးထဲမှာ ဘာသာရေးမဟုတ်တာတွေ ဘာတွေရောလုပ်နေလဲ..
တခြားဘာသာတွေရော လှမ်းကြည့်လိုက် ဘာတွေလုပ်နေကြပြီလဲ .. ပျက်စီးနေတယ်..
လောကရဲ့ သဘောမှာ ရယ်မောခြင်း ငိုကြွေးခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်း ပျက်စီးခြင်းများ ပါရှိသည်...
နိဗ္ဗာန်မှာ ဖြစ်တာမရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပျက်တယ် ဆိုတာလည်း မရှိ... အဲဒါ လောကုတ္တရာ..
ရဟန္တာကြီးများသည် လူစည်ကားရာ နေရာကို ရှောင်ရှားကြသည်.. စည်ကားခြင်းကို ကြောက်ကြသည်..
ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးများ လူစည်ကးရာကို ရှောင်ကာ တောထဲသွားပြီး ဖလသမာပတ် ၀င်စားကြသည်..
(ဆရာတော်၏ လေသံအတိုင်း ပြန်လည်ဖော်ပြပါမည်)
ရှေးဦးစွာ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်၊ ခြေဖျားက ဆံပင်ဖျား တလံမျှရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အနိစ္စရယ် ဒုက္ခရယ် အနတ္တရယ် သုံးချက်တင် ဆင်ခြင်တာ ၀ိပဿနာဥာဏ် ဆယ်တန်ဆုံးတယ်...
၀ိပဿနာဆင်ခြင်တာ ဥာဏ်ဆယ်ချက်ဆုံးတော့ မဂ်စိတ် မလာဘဲနဲ့
အရဟတ္တဖိုလ်စိတ်တွေချည်း တောက်လျှောက် တန်းလာတယ်..
ရောက်လာတဲ့ အရဟတ္တဖိုလ်စိတ်သည် နိဗ္ဗာန်ကို ကြည့်နေတယ်
အရှေ့က ၀ိပဿနာ ဥာဏ်ဆယ်ပါးက ခန္ဓာ... နောက်ပေါ်လာတဲ့ အရဟတ္တဖိုလ်စိတ်က နိဗ္ဗာန်
နောက်တစ်မျိုး ပြင်ပြောမယ်... ရှေ့က၀ိပဿနာ ဥာဏ်ဆယ်တန်က လောကကို ကြည့်တယ်
နောက်ဝင်လာတဲ့ အရဟတ္တဖိုလ်စိတ်က လောကုတ္တရာကို ကြည့်တယ်..
ရှေ့က၀ိပဿနာ ဥာဏ်ဆယ်ပါးက လောကသဘောကို ကြည့်တယ်..
ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ ပျက်စီးတယ်၊ နှိပ်စက်တယ်၊ ဒုက္ခဖြစ်တယ်.. ဒါတွေတွေ့တယ်..
အရဟတ္တဖိုလ်စိတ် ၀င်လာပြီလည်းဆိုရော လောကကြီးကို လွန်ထွက်သွားပြီးတော့ နိဗ္ဗာန် - လောကုတ္တရာကိုကြည့်လိုက်တော့ ဖြစ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး ပျက်ခြင်းလည်းမရှိဘူး..
၀ိပဿနာဥာဏ်ဆယ်ပါးဖြင့် ခန္ဓာကိုကြည့်တော့ (ခန္ဓာဆိုတာ လောကထဲမှာ) ဘာတွေ့လဲဆိုတော့
ပျက်စီးတာ နှိပ်စက်တာ ဖြစ်တာ စတဲ့ ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းကို တွေ့တယ်
အဲဒါတွေကို လွန်ထွက်သွားပြီလည်းဆိုရော အရဟတ္တဖိုလ်စိတ် ၀င်လည်းလာရော
အရဟတ္တဖိုလ်စိတ်က ဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ နိဗ္ဗာန်..
နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ ဖြစ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး ပျက်ခြင်းလည်းမရှိဘူး ပကတိငြိမ်နေတယ် ငြိမ်းနေတယ် (Stability & Peace) လောကထဲမှာ အဲဒီနှစ်ခု မရှိဘူး၊ Stability & Peace မရှိဘူး
Stability & Peace = Happiness ဒါသေချာတယ်
Mentally, Physically - Peace နှစ်မျိုးရှိတယ်
Stability မှာလည်း Stability of Mind, Stability of Life စသည်ဖြင့် ရှိတယ်
ရဟန္တာကြီးတွေက လွတ်မြောက်တဲ့ အရသာ၊ ၀ိမုတ္တိသုခကို ခံစားပြီး လူတွေကို ရှောင်ကြတယ်
မာရ်နတ်ဆိုတာ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်မှာ ထိပ်ဆုံးနတ်ပြည် "၀ဿဝတ္တီ"က နတ်သား
မာရ်နတ် ဘာကြောင့် နာမည်ကြီးလည်း ..
ကောင်းလွန်းလို့ နာမည်ကြီးတာ မဟုတ်ဘူး... ဆိုးလွန်းလို့ နာမည်ကြီးတာ..
မြတ်ဗုဒ္ဓ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်မှာ သီတင်းသုံးတော်မူနေစဉ်တွင်
အနုရုဒ္ဒါ ရဟန္တာအရှင်မြတ်၏ ညီမ "ဥပစာလာ" အမည်ရှိ ရဟန္တာမတစ်ပါးရှိတယ်...
တနေ့မှာ မာရ်နတ်က လျှောက်သွားရင်း ဖလသမာပတ်ဝင်စားနေတဲ့ "ဥပစာလာ" ရဟန္တာမဆီကို ရောက်လာတယ်...
လှပတဲ့ ဥပစာလာ ထေရီဆီကို မာရ်နတ်က ကပ်ပြီး နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်ရဲ့ စည်းစိမ်တွေနဲ့ စည်းရုံးတယ်...
(ဒေါ်လာ မော်တော်ကား အလုပ် ရာထူး ပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ ဖြားယောင်းတာတွေ မပါသေးဘူး..
ဖြားယောင်းတိုင်း ပါမသွားဖို့ Stability of the Mind အရေးကြီးတယ်၊ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်..)
တုန်လှုပ်နေတဲ့ သိကြားမင်းနဲ့ ချစ်သူကို စောင်းတီးအလှဖွဲ့တဲ့ ပဉ္စသိင်္ခ နတ်သား
တဏှာကြောင့် ဝေဒနာဖြစ် <=> ဝေဒနာကြောင့် တဏှာဖြစ်
တဏှာရှိရင် တုန်လှုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အင်အားတွေရှိနေမယ်
ဘ၀ဆိုတာ သဲကမ်းပါးပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်ပြီးနေကြတဲ့ သူတွေလိုပဲ အားလုံးတုန်လှုပ်နေတယ်..
လူ့ပြည် နတ်ပြည် အားလုံး တုန်လှုပ်နေတယ်
ဘ၀ တည်ငြိမ်မှု မှာ စိတ်ပိုင်းနဲ့ ရုပ်ပိုင်း နှစ်မျိုး ရှိတယ် စိတ်ပိုင်းတည်ငြိမ်မှု ပိုအရေးကြီးတယ်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှု အတွက်
စိတ်ကို လှုပ်ရှားစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ "တဏှာ"ကို ဖယ်ထုတ်ပြီး
ငြိမ်းအေးစေတဲ့ စွမ်းအားရှိတဲ့ "ဓမ္မ" ကို အစားထိုး နိုင်ရမယ်
အတွင်းလှိုက် လောင်ကျွမ်းနေတယ်၊ အပြင်ဘက်မှာလည်း တဟုန်းဟုန်းလောင်နေတယ်
စီးပွားရေးလောက၊ လူ့လောက၊ နတ်လောက အားလုံး လောင်ကျွမ်းနေတယ်
၁.တုန်လှုပ်နေတယ် (နှလုံးသားတွေ တုန်လှုပ်နေတယ်)
၂.အတွင်းမှာ တလှိုက်လှိုက်လောင်နေတယ် (ကိလေသာမီးတွေ)
၃.အတွင်းမှာ လောင်တာ မထိန်းနိုင်တော့ အပြင်ထွက်လောင်တယ် (ကိလေသာမီး)
၄.အတွေးနယ်ချဲ့ပြီး အခိုးတွေ ထနေတယ် (စိတ်ထဲမှာ တွေး တွေးပြီးပူနေတယ်၊ စီးပွားဥစ္စာ အစရှိတဲ့ ကာမဂုဏ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အတွေး၊ စိတ်ညစ်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အတွေး၊ သူတပါးကို သတ်ဖြတ် နှိပ်စက်ဖို့နဲ့ ဆိုင်တဲ့အတွေး)
နိဗ္ဗာန် မှာ -
တုန်လှုပ်ခြင်းလည်းမ၇ှိ ၊ အခိုးထခြင်းလည်းမရှိ
ဘ၀တည်ငြိမ်မှုကို အပြည့်အ၀ တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ
ဘာစည်းစိမ်တွေနဲ့ပဲ ဖြားယောင်းဖြားယောင်း မတုန်လှုပ်ပါစေနဲ့...
-"လောက၏သဘော" တရားတော် - ရယူနာကြားနိုင်ရန်
သူငယ်ချင်း ညီအကို မောင်နှမ မိတ်ဆွေများအားလုံး ...
အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာတော်အကျိုးကို တတ်အားသမျှ သယ်ပိုး ထမ်းရွက်သွားနိုင်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ...
ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါတယ် ....
အညွှန်း - တရားတော် TayarDaw, နာကြားခဲ့သော တရားတော်များ, ဘ၀ Life
အီးဘွတ်ခ် - ဟက်ကာနည်းပညာစာအုပ်များ
ဟက်ကာ နည်းပညာတွေကို လေ့လာလိုတဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေအတွက် အင်တာနက်ကနေ ရှာဖွေ တွေ့ရှိတဲ့ စာအုပ်များကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်..
"ကွန်ပျုတာ သင်္ကေတများကို ဘယ်လို ဖောက်ထွင်းချိုးဖျက်မလဲ" ဆိုတဲ့ စာအုပ် - ပီဒီအက်ဖ် - စာမျက်နှာ ၅၉၇ - ၇.၇၆ မီဂါဘိုက် အခန်းပေါင်း (၈)ခန်း - ရည်ညွှန်းကိုးကားရန် အက္ခရာအညွှန်း
ဆော့ဖ်ဝဲ တွေကို ဘယ်လို ဖောက်ထွင်းကြည့်လို့ ရသလဲ
အဲဒီလို ဖောက်ထွင်းကြည့်သူတွေဟာ ဘယ်လို အကြောင်းတွေကြောင့် ဖောက်ကြည့်တာလဲ
Fire Wall, Intrusion Detection Systems တွေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ တွေဟာ ဒီလို လူဆိုးတွေကိုတော့ ဘာလို့ မကာကွယ်နိုင်တာလဲ
ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ဖောက်ထွင်းဖို့ ဘယ်လို ကိရိယာ တွေကို သုံးမလဲ
အဲဒီအချက်တွေ အတွက် အဖြေတွေ ဒီစာအုပ်မှာ ပါရှိပါတယ်
ဒီစာအုပ်ဟာ ပညာပေးဖို့ အတွက် သီးသန့်ရည်ရွယ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ ရေးသားထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို လုံခြုံအောင် ဘယ်လို အကာအကွယ် လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ ဖောက်ထွင်းကြည့်တဲ့ နည်းစနစ်တွေကို လေ့လာတဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ်
"လုံခြုံသော ကွန်ပျုတာ သင်္ကေတများ - ရေးသားနည်းများနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ" ဆိုတဲ့ စာအုပ် - ပီဒီအက်ဖ် - စာမျက်နှာ ၂၀၀ - ၂.၁ မီဂါဘိုက် အခန်းပေါင်း (၆)ခန်း - ရည်ညွှန်းကိုးကားရန် အက္ခရာအညွှန်း
ကွန်ပျုတာ စနစ်တွေထဲကို ဖောက်ဝင်နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ စနစ်တွေမှာ လုံခြုံမှု အားနည်းတဲ့အတွက် ဖောက်နိုင်တယ် ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်
ဒီဇိုင်း၊ လက်တွေ့ရေးသားမှု၊ စမ်းသပ်မှု နဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ အားလုံးမှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေလေလေ တိုက်ခိုက်ခံရဖို့ အခွင့်များလေလေ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီစာအုပ်ကတော့ အားနည်းချက်ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ် သင်္ကေတများဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ရှုထောင့်သစ် တစ်ရပ်ကနေ တင်ပြထားပါတယ်
စာအုပ်ကို ပြုစုသူကိုယ်တိုင်က ကွန်ပျုတာ လုံခြုံမှုစနစ် နယ်ပယ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေက ရလာတဲ့ အချက်တွေကို စုစည်းဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်
မှတ်ချက် - ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဒီစာအုပ်တွေကို
အဖွဲ့ ၅၀၉ ဒေါ့ကွန်း ဆိုတဲ့ အင်တာနက်နေရာ တစ်ခုကနေ ဂူဂဲလ် အကူအညီနဲ့ ရှာတွေ့ခဲ့တာပါ
တခြားနေရာတွေမှာ ဒီစာအုပ်တွေ ရှာမတွေ့သေးပါဘူး
အဲဒါကြောင့် မြန်မာလိုတွေပဲ ရေးပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်
ဟက်ကာနည်းစနစ်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်ပေါင်း အားလုံး ၄၉ အုပ် ရထားပါတယ်
အညွှန်း - စာအုပ် eBooks, လေ့လာသင်ယူခြင်း Learning
A Trick for Downloading Filefactory
Filefactory ၀က်ဆိုဒ်ကနေ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တဲ့ အခါ Limit ကျော်သွားပြီလို့ ပြောလာရင် ဖြေရှင်းနည်းလေးပါ..
After reaching filefactory Free Download limits
simply do this;
1. Tools -> Options -> Privacy
2. Click -> Show Cookies
3. Type FILEFACTORY in Search Box of Cookies window
4. Select all appear cookies, named like this
(site:filefactory, cookie name:PHPSSID)
(site:filefactory, cookie name:cookieEnabled)
(site:filefactory, cookie name:ff_referrer)
5. click Remove Cookies (after selecting all filefactory cookies)
6. Close - Cookies window
Go & Enjoy next filefactory free download.
for Internet Explorer 6.0
1. Tools -> Internet Options
2. under General, click Settings in Temporary Internet Files box
3. in Settings window, click View Files... ,
Temporary Internet Files window will appear
4. look for Cookie:USERNAME@www.filefactory.com etc.,
5. Delete all @www.filefactory.com cookies
6. close Temporary Internet Files window
7. click OK in Settings, OK in Internet Options
Direct Link to Temporary Internet Files in XP ( need to change USERNAME, to your current Log In "user name")
C:\_Documents and Settings\_ USERNAME\_Local Settings\_Temporary Internet Files
(အချိန်မရလို့ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသားများအတိုင်းပဲ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်)
ညီအကိုမောင်နှမများ အားလုံး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းကြပါစေ
အညွှန်း - Help, အကူအညီ
ကိုယ်ပိုင် Proxy စာရင်း ဖန်တီးခြင်း
Google ကိုအသုံးချပြီး CGI Proxy တွေရှာနိုင်တဲ့နည်းတွေနဲ့ Rapidshare ကဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုဒ်ချ နိုင်တဲ့နည်းတွေကို ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်.. အခုထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ချင်တာကတော့ CGI Proxy တွေကို ရှာနိုင်တဲ့ နောက်ထပ် သော့ချက် စကားလုံး (Keywords)တွေနဲ့ မိမိအတွက် ကိုယ်ပိုင် CGI Proxy စာရင်းတစ်ခု အဖြစ် ဖန်တီးထားပြီး အချိန်မရွေး ပြန်အသုံးချနိုင်တဲ့ အကြောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ် ...
ဆိုတဲ့ သော့ချက် စကားလုံးတွေ ဖြစ်ပါတယ် ....
အဲဒီ သော့ချက်စကားလုံး တွေကို Google Search မှာ ထည့်သွင်းရှာဖွေလိုက်မယ်ဆိုရင် တိုက်ရိုက် အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ CGI Proxy တွေပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်းပဲ အဲဒီမှာ Google ရဲ့Start Using CGI Proxy စတဲ့ အဖြေကနေ တိုက်ရိုက် ကလစ်လုပ်ပြီး ဒါမှမဟုတ် Right-Click လုပ်ပြီး
Firefox မှာဆိုရင် "Open Link in New Tab" နဲ့
Internet EXplorer မှာဆိုရင် "Open in new window"
စတာတွေကို ကလစ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုချင်တဲ့ CGI Proxy ကို အသင့် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အနေအထားနဲ့ အများဆုံး အမြန်ဆုံး မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
nph-proxy.cgi Proxy များရှာရန်
nph-proxy.pl Proxy များရှာရန်
အောက်မှာ နမူနာပုံလေးကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်
ပုံ - အဆင်သင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် တကယ်အလုပ်လုပ်နေသော CGI Proxy များစာရင်း
သဘောကျတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို သီးသန့် Bookmark လုပ်ထားလို့ ရသေးပါသေးတယ်
ပြီးတဲ့အခါ အလွယ်တကူပြန်သုံးနိုင်အောင် သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို ပြန်ဖွင့်၊ Firefox မှာဆို Bookmark လေးလုပ် (IE မှာဆိုရင်တော့ Add to Favorites ပေါ့လေ) ၊ သုံးနေရင်း အချိန်တစ်ခုအထိကြာသွားလို့ အသစ်တွေထပ်တိုးလာတာ လိုချင်ရင်တော့ အခုလုပ်ခဲ့တဲ့ အတိုင်း ပြန်လုပ်တာနဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ..
အင်တာနက် ကဖေး၊ ကျောင်း၊ ခရီးဝေး စတာတွေ သွားရတဲ့ အခါမှာလည်း မန်မိုရီစတစ် (Memory Stick) လေးနဲ့ ထည့်ယူသွားလိုက်ရုံပါ.. PDA သမားတွေကတော့ PDA ထဲမှာထည့်သွားတာပေါ့ .. (Firefox Bookmark တွေနဲ့ IE Favorites တွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေ သိမ်းဆည်းနည်းလေးကို မကြာခင် Help ဖတ်လို့ရမှာပါ...
အင်တာနက်ထဲမှာလဲ Proxy တွေကို စာရင်းပြုစုပေးထားတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေ အများကြီးပါ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆိုဒ်တွေက ကြော်ငြာတွေများတဲ့ အပြင် အခုလို တိုက်ရိူက်သွားလို့ရတဲ့ အနေအထားမျိုးကိုတော့ Google ကနေရှာမှပဲ ရတာပါ..
သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်း ညီအကိုမောင်နှမများ အားလုံး
အင်တာနက်နှင့် အိုင်တီနည်းပညာများကို အထိရောက်ဆုံး အကျိုးအရှိဆုံး အသုံးချနိုင်ကြပါစေဗျာ ..
အညွှန်း - Google ကို အသုံးချခြင်း Using Google, နည်းလမ်း technique
Utilities On Web (3) - Google Online Translator
အင်တာနက်ထဲမှာ တစ်ခုခု သိချင်တာ ရှာရင်းဖွေရင်း
ကိုယ်မသိတဲ့ ဘာသာစကားတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် Google က အလွယ်တကူ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်
အသေးစိတ်ကိုတော့ ပုံလေးတွေမှာ နမူနာ လေ့လာ နိုင်ပါတယ်
လက်တွေ့ ဘာသာပြန်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်ဘက်မှာ တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းတွေ ရှိပါတယ် ..
သိထားပြီးသား ရောင်းရင်းတွေအတွက်တော့ သိပ်မထူးတော့ပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ...
Google မှာ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်လိုရှာနေတာ ရလာတဲ့ အဖြေတွေက တခြားဘာသာတွေဖြစ်နေရင်လည်း Google က ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် [Translate this page]ဆိုပြီး ဘေးမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ် အဲဒီစာလေးကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရှာနေတဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ (အများအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်လို) ဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့ စာမျက်နှာတွေကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
ရုရှားက အင်တာနက်ဆိုဒ်တွေနဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာက အင်တာနက် ဆိုဒ်တွေအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မသိသေးတဲ့ ဆိုဒ်တွေ အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ် ဆော့ဖ်ဝဲတွေ နည်းပညာနဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေကို ဝေမျှနေကြတာပါ... အဲဒီဆိုဒ် တွေထဲကို Google ကနေရှာရင်း ထွက်လာတဲ့ အဖြေတွေထဲက [Translate This Page], Cached စတဲ့ Google ရဲ့ အံ့မခန်း ၀န်ဆောင်မှုတွေကို အသုံးပြုပြီး အဲဒီဆိုဒ်တွေထဲကို Log in လုပ်နေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ အမြန်ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ကိုယ်လိုချင်တာတွေရှာနိုင်ပါတယ်... ဆော့ဖ်ဝဲ ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ် တွေကိုလည်း ရနိုင်ပါတယ်
စာသားများ အင်တာနက် စာမျက်နှာများကို ဘာသာပြန်ရန်
သူငယ်ချင်း ညီအကိုမောင်နှများ အားလုံး
အင်တာနက်ကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အကျိုးအများဆုံး ရအောင် အသုံးချနိုင်ကြပါစေ...
အညွှန်း - Google ကို အသုံးချခြင်း Using Google, Utility
ဒီနေ့ဟာ - မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၉ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်းရှစ်ရက် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်...
ဒီလို ဥပုသ်နေ့ တစ်နေ့မှာ ရပ်နီးရပ်ဝေးက မြင်ဖူး၊ မမြင်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် နာကြားဖြစ်တဲ့ တရားတော် တစ်ပုဒ်ကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ...
“ကုသိုလ်ဆိုတာ ဘာလဲ” တရားတော်ပါ...အကြောင်းအရာ အချို့ကို ထုတ်နှုတ် ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ...အောက်ဘက်မှာ တရားတော် ကို ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်တဲ့နေရာလည်း ပေးထားပါတယ်...
တရားတော်မှ ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြချက် အချို့
လက္ခဏာ (၂) ချက်
အပြစ်ကင်းတဲ့ လက္ခဏာ ချမ်းသာတဲ့ အကျိုးပေးကို ပေးတတ်တဲ့ လက္ခဏာ ရှိသည်...
သတ္တိ (၂) ချက်
အကုသိုလ်တရားတွေ ယုတ်မာတဲ့ သဘောတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်တတ်တဲ့ သတ္တိရှိသည်...
(ကုသိုလ်ရကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှား ဘယ်လို ပြနိုင်သလဲ)
ကုလိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့ သူရဲ့ အသွင်မှာ ဖြူစင်တဲ့ သဘော လက္ခဏာတွေ ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာသည်
ကိုယ် နှုတ် စိတ် အမူအရာများ ဖြူစင်လာသည်..
ကုလိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ - ယောနိသော မနသိကာရကြောင့်ဖြစ်သည်
အကုသိုလ်တရားတွေကို သိမ်းကျုံးပြီး အပြစ်ဟုခေါ်သည်
လောဘ ဒေါသ နှင့် မစ္ဆရိယ ဟုခေါ်သော စေတသိတ် သုံးမျိုးမှာ အလွန်အပြစ်ကြီးစေသည့် အရာများဖြစ်သည်။ လိုချင်နှစ်သက်မှုကို အကြောင်းပြု၍ ရှာဖွေကြရသည်။ စား၊၀တ်၊နေဖို့ ရှာကြရသည်။ ရှာစဉ်ကတည်းက တဏှာအခြေခံ၍ ရှာကြသည်...
လိုချင်တာရတော့ ၀မ်းသာကြသည်။ တဏှာဖြင့် ၀မ်းသာကြသည်။
ရလာသော အရာများအပေါ် အခြေခံကာ ဘယ်နေရာတွင် ဘယ်လောက်သုံးမလဲ စသည်ဖြင့် ၀ိတက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချသည်... ရလာတဲ့ ပစ္စည်းများသည် ငါပိုင်တာတွေ ဖြစ်သည်ဟု တဏှာလောဘဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်
ငါပိုင်တာ တွေဟာ ဘယ်တော့မှ မပျက်စီးတော့ဘူး ဟု ဒိဌိဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ ရလာတဲ့ အရာတွေကို အာရုံငါးပါး အတွက် ဘယ်လို အသုံးပြုမည် စသည်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ၄င်းပစ္စည်းများ အပေါ် ပိုမို ပြင်းထန်စွာ စွဲလန်း တပ်မက်လာပြီး တပါးသူတွေကို မပေးနိုင်ဟု ဒေါသနဲ့ တွဲနေသော မစ္ဆရိယစိတ်များ ပေါ်လာသည်။ သူတပါး အတွက် မဟုတ်ဘူး ငါ့အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ တခြားသူအတွက် ရှာထားတာ မဟုတ်ဘူးဟု မစ္ဆရိယနှင့် ဒေါသ ၀င်လာသည်...
ဒီလို တွေးမိတာနဲ့ ဆင်းရဲတော့သည်...
ဒါဟာ အကုသိုလ်ရဲ့ သဘောဖြစ်သည်...
မိမိမှာ ရှိတဲ့ အရာတွေကို သူများကို မပေးနိုင် ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်တာနဲ့ မစ္ဆရိယစိတ်ဝင်လာပြီး ဒေါသနဲ့ ဆင်းရဲကျန်ရစ်သည်.. ဆင်းရဲခြင်းကို သဒ္ဒါတရားနဲ့ စေတနာ နှစ်ပါးက ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည် ရတနာသုံးပါး တို့၏ ဂုဏ်သတ္တိကို ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် လောဘ ဒေါသ မစ္ဆရိယ စိတ်များ ကင်းဝေးသွားသည်...
သံသရာတွင် အကျိုးမဲ့ ဖြစ်မည်ကို မြင်လျှင် ဗုဒ္ဓက တားဆီးပေးသည်
ကောင်းကျိုးစီးပွား ဖြစ်မည်ကို မြင်လျှင် ဗုဒ္ဓက ညွှန်ကြားပေးသည်
ဗုဒ္ဓ၏ ဤဂုဏ်ကျေးဇူးကို ယုံခြင်းကြောင့် မိမိတို့၏ စိတ်နှလုံးတွင် ကြည်လင်လာသည့် သဘောရှိခြင်းကို သဒ္ဒါ ဟုခေါ်သည်...
တရားတော်များသည် လူသားတို့ကို ဘ၀ ကန္တာရ အခက်အခဲမှ ကယ်တင်တတ်သည်.. အလွန်ပင်ပန်း ဆင်းရဲနေချိန်တွင် သက်သာမှု ပေးနိုင်သည်.. ရေမရှိသည့် သဲကန္တာရတွင် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ခရီးသွားနေသူကဲ့သို့၊ ဘ၀၏ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုး များဖြင့် (၁၁)ပါးသောမီးများ လောင်ကျွမ်းကာ သံသရာခရီးသွားနေသည့် လူသားတို့ကို ၀န်ပေါ့အောင် ကယ်တင် ပေးနိုင်သည် သက်သာမှုပေးနိုင်သည်... ထိုသတ္တိထူးနှစ်ပါး မိမိတို့နှလုံးသားအတွင်း ရောက်အောင်သွင်းနိုင်သည်နှင့် စိတ်နှလုံးမှာ ကြည်လင်လာသည်
ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုရားရှင်၏ တပည့်သားများဖြစ်သော သံဃာတော်များသည် သံသရာမှ
လွတ်မြောက်အောင် ကျင့်နေကြသည် အားထုတ်နေကြသည်၊ ထိုသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို လှူဒါန်းရခြင်းသည် ကြီးမားသော အကျိုးရှိသည်ဟု ယုံကြည်ချက် မိမိတို့ နှလုံးသားထဲရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အေးချမ်းလာလိမ့်မည်
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာ ရတနာသုံးပါးဂုဏ်သတ္တိများ အပေါ်အာရုံပြု၍ အလှုအတန်းပြုပါ
ကံသာလျှင်ကိုယ်ပိုင် ဥစ္စာဟူသော ယုံကြည်ချက်ရှိပါ
သဒ္ဒါနဲ့ စေတနာတွဲလာသည်နှင့် သံသရာမှာ ဖြစ်လာမည့် အပါယ်လေးပါး စသည့် မကောင်းကျိုးတွေကို ဖျက်ဆီးပေးသည် .. လူနတ် နိဗ္ဗာန် စသည့် ကောင်းကျိုးများဖြစ်ထွန်းစေသည်..
လှူမည်ဟု ကြံတိုင်း ကြံတိုင်းဖြစ်သော မနောကံစေတနာ
လှူမည်ဟု တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတိုင်းဖြစ်လာသော ၀စီကံစေတနာ
တကယ်လှူသည့်အခါ လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်း ဖြစ်လာသော ကာယကံစေတနာ
ဤစေတနာတို့သည် ကြည်လင်နေသော သဒ္ဒါနှင့် တွဲမိသည်နှင့် မကောင်းကျိုးများကို ဖျက်ဆီးပေးသည်
သဒ္ဒါနှင့် စေတနာသည် အလှူရှင် အစစ်ဖြစ်သည် ငါလှူတာမဟုတ်ဟု ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါနှင့် သဒ္ဒါစေတနာဟူသော ပရမတ္ထတရားများ ခွဲခြားသိမြင်ပါ..
ပစ္စည်းကို ငါပိုင်အဖြစ်နဲ့ မသိမ်းပါနှင့် သေလျှင်ထားခဲ့ရမည်
စွဲလန်းစိတ်ဖြင့်သေလျှင် သံသရာမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မည်
စေတနာ (ကံ)ကိုသာ မိမိအပိုင်ဟု ယုံကြည်လျှင် တဏှာနှင့် ဒိဌိ မကပ်နိုင်
ဤကုသိုလ် စေတနာသာလျှင် သံသရာတွင်မိမိနောက်မှ ပါလာမည်
(သဒ္ဒါနှင့် စေတနာစသည့်ပရမတ္ထတရားများသည် အလှူရှင် အစစ်ဖြစ်သည် ငါလှူတာမဟုတ် ဟူသော မှန်ကန်သည့် အသိအမြင်လိုအပ်သည်)
သီလမပြည့်စုံလျှင် အလှူပစ္စည်း မသန့်ရှင်းဘဲ ဖြစ်တတ်သည်.. လှူမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နှင့် သီလလုံအောင်ထားပြီး ရှာဖွေစုဆောင်းပါ..
ဤအလှူကြောင့် ကာမဂုဏ်စည်းစိမ် စသည့်အရာများ ရရှိခံစားလိုသည် ... အစရှိသည့် တဏှာမပါစေနှင့်
သီလနည်းလျှင် လူချမ်းသာပေမယ့် ရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးတွေ့ရတတ်သည်
ပါဏာတိပါတကံကျုးလွန်လျှင် အသက်တိုသည် အင်္ဂါချို့တဲ့တတ်သည်
သူတပါးကို နှိပ်စက်တတ်သူ ရောဂါထူသည် ...
ပစ္စည်းချမ်းသာသည် အသက်မရှည် (ဒါန + ပါဏာတိပါတရှိ)
ပစ္စည်းချမ်းသာသည် အသက်ရှည် အနာရောဂါများသည် (ဒါန + ပါဏာတိပါတမရှိ + ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တတ်ခြင်းကြောင့်)
ပစ္စည်းချမ်းသာသည် အသက်ရှည်သည် (ဒါန + ပါဏာတိပါတမရှိ)
ပစ္စည်းချမ်းသာသည် အသက်ရှည် အနာရောဂါကင်းသည် (ဒါန + ပါဏာတိပါတမရှိ + ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တတ်ခြင်းမရှိ)
ပစ္စည်းချမ်းသာသည် ရောဂါများ (ဒါနရှိ + ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တတ်)
ပစ္စည်းမချမ်းသာ အသက်မရှည် ရောဂါထူ (ဒါနမရှိ + သူ့အသက်သတ် + ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တတ်)
သူတပါးကို သတ်သူသည် အသက်တိုသည်...
သူတပါးကို နှိပ်စက်တတ်သူ သတ်သူ အသက်တိုပြီး ရောဂါထူသည်...
မတရားခိုးယူလာသော ပစ္စည်းများနှင့် အလှူပြုသော အခါ
ချမ်းသာသော်လည်း ရန်သူမျိုးငါးပါးကြောင့် ပျက်စီးရတတ်သည်...
ယထာဘူတဥာဏ်မရလျှင်... နိဗ္ဗိန္တဥာဏ် မရနိုင်...
နိဗ္ဗိန္တဥာဏ် မရလျှင်... ၀ိရာဂမဖြစ်...
၀ိရာဂမဖြစ်လျှင် ... ၀ိမုတ္တိမဖြစ်တော့...
သီလသည် လောကီနှင့် လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာအတွက် ကြီးပွားကြောင်းတရား ဖြစ်သည်။
အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်၏ သီလကောင်းမွန်မှု၊ အလှူပစ္စည်း၏ သန့်ရှင်းမှု၊
အလှူရှင်၏ အစ အလယ် အဆုံး ၊မလှူမှီ အလှူပြုစဉ်နှင့် လှူပြီး စေတနာများကောင်းမွန်မှု၊
အလှူ့ရှင်၏ ကံနှင့် ကံ၏အကျိုးတရားအပေါ်ယုံကြည်မှု
အစရှိသည့် ၀ိသုဒ္ဓိလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံနေလျှင် အလွန်တရာကြီးကျယ်သော အကျိုးတရားများ ရနိုင်သည်
ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်များကို လိုချင်တဲ့ စိတ်တွေ မပါစေနဲ့
ဒုက္ခအားလုံးတို့၏ အကြောင်းရင်း တဏှာလောဘကို ပယ်ဖျောက်နိုင်မှသာလျှင်
ဒုက္ခအစုအပုံအတွင်းသို့ နောက်တစ်ကြိမ် မရောက်နိုင်တော့...
အခုဖော်ပြထားတာ တွေက တချို့တ၀က်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ် ..
ဆရာတော် ဟောကြားထားတာက အများကြီး ပြည့်စုံပါတယ်...
ဖော်ပြထားတာတွေမှာ တစ်ခုခု အမှားအယွင်းများ ပါရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ဘက်က ချွတ်ယွင်းချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်...
အမှတ်မလွဲရအောင် ဖတ်ပြီးသွားရင် တရားတော်ကို ရယူနာကြား စေချင်ပါတယ်...
-"ကုသိုလ်ဆိုတာ ဘာလဲ" တရားတော် - ရယူနာကြားနိုင်ရန်
အညွှန်း - တရားတော် TayarDaw, နာကြားခဲ့သော တရားတော်များ
အီးဘွတ်ခ် - ဆေးပညာစာအုပ်များ(၁)
အရပ်ရပ်မှာ ရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် MM Open Library မှာသွားတင်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဒီမှာလည်း ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အင်တာနက်ထဲကနေ ရှာတွေ့တဲ့ ဆေးပညာ စာအုပ်တွေပါ..
1.Common Eye Diseases and their Management
မျက်စိဆိုင်ရာရောဂါများနဲ့ ဘယ်လိုပြုစု ကုသမလဲ ဆိုတာတွေကို ရောင်စုံ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့တကွ ရှင်းပြထားပါတယ်
File Info: PDF, 208 Pages
Download info: nrgalloway.rar, 6.06 MB
2.Shields' Textbook of Glaucoma
ရေတိမ်ရောဂါ (Glaucoma) အကြောင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်..
R. Rand Allingham ရေးပါတယ်
File Info: CHM format, 49.72 MB
Download Info: sh_ields__textbook_of_glaucoma__5th_ed_0, chm
ရေတိမ်ရောဂါအကြောင်းကို ရောင်စုံသရုပ်ဖော်ပုံ ၆၈ ပုံ၊ ဇယားပေါင်း 18 ခုပါဝင်ထည့်သွင်း ရှင်းလင်းထားတဲ့ စာအုပ်ပါ
Franz Grehn နဲ့ Robert Stamper တို့တည်းဖြတ်ပြီး ဂျာမနီမှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်
File Info: PDF, စာမျက်နှာ ၁၉၅ မျက်နှာ
Download Info: glaucoma.pdf, 3.92 MB
4.Pediatric Sleep Diagnosis and Management of Sleep Problems
Jodi A. Mindell ရေးတဲ့ အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာများနဲ့ ဖြေရှင်နည်းများဖြစ်ပါတယ်
File Info: PDF
Download Info:Zip, 2.65 MB
I found all these links from other internet resources, and using search engines.
Thanks for my great friends:
Google, MiHD.net & Blogger,
also all Bloggers who are sharing what they found from the net,
for this post. ;) =)) ...
အညွှန်း - စာအုပ် eBooks, ဆေးပညာ
မြန်မာအမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းက ထိုင်းအမျိုးသမီးအသင်းကို နှစ်ကျော့ပြန် အနိုင်ယူလိုက်နိုင်တာကို တွေ့ရတဲ့ အတွက် မြန်မာတစ်ယောက် အနေနဲ့ အထူး ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ...
နောင်အနာဂါတ်ကာလများမှာလည်း အခုထက်ပိုပြီး အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီး အာရှ အဆင့်၊ ကမ္ဘာ့ အဆင့်များ အထိ တက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
အညွှန်း - Myanmar Woman, မြန်မာ Myanmar
Utilities On Web (2) - CCleaner
CCleaner ဆိုတာ အင်တာနက်ထဲမှာ အခမဲ့ရပြီး အသုံးလည်းဝင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...
စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့က အချက်အလက်များအရ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကို ဒေါင်းလုဒ်တဲ့ အကြိမ်ပေါင်း ၈၅ သန်း ရှိသွားပြီလို့ သိရပါတယ်...
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပျုတာစနစ်တွေကို စွမ်းဆောင်ရည် တက်လာအေင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အကူအညီပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပျုတာတွေမှာ မလိုအပ်တော့တဲ့ ဖိုင်တွေကို အလိုအလျောက် ရှာဖွေဖျက်ဆီးပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ၀င်းဒိုးစနစ် (Windows OS) ရဲ့ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုကို ပိုမို လျှင်မြန်စေပြီး ဟာ့ဒ်ဒစ်မှာလည်း အဖိုးတန် နေရာလွတ်တွေ ပိုများလာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်..
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တကိုယ်ရည် လွတ်လပ်ခွင့် ကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ ကွန်ပျုတာ အသုံးပြုနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်.. ဘယ်ဖိုင်တွေကို ဖွင့်ခဲ့တယ်.. ဘယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ ကြည့်ခဲ့တယ်.. စတဲ့ သူများ မသိစေချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အားလုံးကို ဖယ်ရှား ရှင်းလင်း ပေးနိုင်ပါတယ်.. သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အချက်ကတော့ ခိုင်းလိုက်တာနဲ့ တစ်စက္ကန့်လောက် အတွင်းမှာ အလုပ် စလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အထိ လျင်မြန်ပြီး အသုံးပြုသူတွေကို လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းတဲ့ (Spyware/Adware)တွေ မပါရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. (သူတို့အပြောပေါ့နော :))
အင်တာနက် အိတ်စ်ပလိုဝါ (Internet Explorer, IE)၊ မီးမြေခွေး (Firefox)၊ အော်ပရာ (Opera) စတဲ့ အင်တာနက် ကြည့်ဆော့ဖ်ဝဲ အသီးသီး ကနေ ယာယီ အသုံးပြုထားတဲ့ ဖိုင်တွေ (Temporary files)၊ အင်တာနက် လိပ်စာတွေ (URL History)၊ ကွတ်ကီးတွေ (Cookies)၊ အလိုအလျောက် ဖြည့်ပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေ (Autocomplete form history) နဲ့ အညွှန်းဖိုင်တွေကို ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်...
Windows OS ကနေ ယာယီအသုံးပြုထားတဲ့ ဖိုင်တွေ၊ မှတ်တမ်း(Log) ဖိုင်တွေနဲ့မကြာသေးမီက ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ အမှိုက်ပုံးကို ရှင်းလင်းပေးပါတယ်။
ကွန်ပျုတာရဲ့ ရီဂျစ်စရီထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အသုံးမပြုတော့တဲ့ အချက်အလက် ဟောင်းတွေ၊ Extension၊ ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, Shared DLLs, Fonts, Help Files, Application Paths, Icons, Invalid Shortcuts စတာတွေကို တစ်ခါတည်း Backup လုပ်ပေးရင်း ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်
ဒါ့အပြင် Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, MS Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip စတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ အခါကျန်ရှိနေတဲ့ ယာယီ အသုံးပြုထားတဲ့ ဖိုင်တွေ၊ MRU လို့ခေါ်တဲ့ မကြာသေးမီက အသုံးပြုထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းလင်းပေးပါတယ်...
Links for Version 2.0
နောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ Version 2.0 ဟာဆိုရင် အရင်အမျိုးအစား တွေထက် ပိုမိုကျစ်လျစ်လာပြီး၊ USB Drive တွေထဲကနေ အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်..
Home Page - Link
Download Page for Version 2.0 - Link
Direct Download for Version 2.00.500 (2,553KB) - Download
Credit for this post to "The proud developers of CCleanerasystem optimization tool, @www.piriform.com"
အညွှန်း - Utility
ဒီနေ့ဟာ - မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၉ ခုနှစ်၊ ၀ါခေါင်လကွယ်နေ့၊ အင်္ဂါနေ့ ဖြစ်ပါတယ်...
ဒီလို ဥပုသ်နေ့ တစ်နေ့မှာ ရပ်နီးရပ်ဝေးက မြင်ဖူး၊ မမြင်ဖူးတဲ့
သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် နာကြားဖြစ်တဲ့ တရားတော် တစ်ပုဒ်ကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ...
“မေတ္တာတရား” တရားတော်ပါ...အကြောင်းအရာ အချို့ကို ထုတ်နှုတ် ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ...
မေတ္တာဆိုတာ ချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ မတူပါ...
မြင်ဖူးသူ၊မမြင်ဖူးသူ ချစ်သူ၊မုန်းသူ ဝေးသူ၊နီးသူ သွေးစပ်သူ၊သွေးမစပ်သူ စသည်ဖြင့် အပိုင်းအခြား အကန့်အသတ်မရှိ ကောင်းကျိုး ဖြစ်စေလိုသော သဘောရှိတာ မေတ္တာ.. ကိုယ်တိုင် လွယ်မွေးခဲ့ ရတဲ့ သားတစ်ယောက်ပဲ ရှိတဲ့ မိခင်တစ်ဦးက ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ပင် စွန့်လွှတ်၍ ထိုသားကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ သတ္တ၀ါ အနန္တရဲ့ အပေါ်မှာ သန့်ရှင်းသော၊ အပိုင်းအခြား အကန့်အသတ်မရှိ ကောင်းကျိုး ဖြစ်စေချင်သော၊ မိခင်စိတ်နှင့်တူလှစွာသော စိတ်မျိုးကိုထားခြင်း .... တဏှာရာဂမပါသော၊ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ချစ်သော၊ မိမိအတွက် မျှော်လင့်ချက်မထားသော၊ သားသမီးအပေါ် အပိုင်းအခြား အကန့်အသတ်မရှိ ကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုသော စိတ်ထားမျိုးများ... ထားရှိခြင်း
ရင်သွေးဆိုတာ မိခင်ရဲ့ ရင်မှဖြစ်တဲ့ သွေးနီနီတွေဟာ မိခင်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာဓါတ် အစွမ်းကြောင့် ပကတိဖြူစင် သန့်ရှင်းတဲ့ နို့ရည်အဖြစ် သောက်သုံးခွင့်ရတဲ့သူ ၊မိခင်ရဲ့ နီရဲတဲ့ သွေးကနေ ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာကြောင့် အနီရောင်ကနေ အဖြူရောင်သာဖြစ်၊ မိခင်ရဲ့ မေတ္တာဓါတ်ကို နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း သောက်သုံးခွင့်ရတဲ့ ကလေးဖြစ်လို့ အရှေ့တိုင်းမှာ သေတဲ့ အထိခွဲလို့ မရတဲ့ မိသားစုစိတ်ဓါတ် ပေါ်ထွန်းလာတာ...
လူနို့သောက်တဲ့ အကျင့်ကနေ တိရိစ္ဆာန်နို့ပြောင်းတိုက်တဲ့ ခေတ်ဖြစ်လာတာ စိုးရိမ်စရာ၊စိတ်ဓါတ်နဲ့ အကျင့်တွေ ပြောင်းသွားနိုင်၊ သားသမီး ၀တ္တရား (၅)ပါး၊ မိဘ ၀တ္တရား (၅)ပါး စတဲ့ အပြန်အလှန် ဆောင်ရွက်ရတဲ့ အလေ့အထတွေ ကျင့်ဝတ်တွေ ပျောက်သွား ... မွေးကတဲက တိရိစ္ဆာန်နို့ သောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေ မိခင်မေတ္တာ မရလို့ ရိုင်းစိုင်းလာတာ မဆန်းပါ ...
ကြမ်းတမ်းတဲ့ အလေ့အထတွေကို မေတ္တာနဲ့သာ ပျောက်အောင် လုပ်နိုင်တယ်...
မေတ္တာပွားခြင်းအားဖြင့် နူးညံ့၊ ရိုးသား၊ ဖြောင့်မတ်၊ လောဘကင်းလာ၊ စိတ်ဓါတ်ရဲ့ အရည်အသွေးတွေ တိုးတက်လာမယ်..
မေတ္တာဆိုတာ တစ်ဦးတည်းသော သားရှိတဲ့ မိခင်စိတ်မျိုး၊ ကိုယ့်အတွက် ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မထားဘဲ သူ့အတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်ကို အပိုင်းအခြား အကန့်အသတ်မရှိ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ နာနာမွေးတာဟာ မေတ္တာ ဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်...
မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ စိတ်မဆိုးတာ မေတ္တာစိတ်.. အဒေါသ (ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်)
မေတ္တာ ပွားတယ်ဆိုတာ ဒေါသကို ဖယ်ရှားတာ
ပထမအဆင့် ဒေါသမထွက်အောင် ထိန်းထား
ဒုတိယအဆင့် ရင်ထဲကနေ အပြင်ထွက်မလာအောင် နှိပ်ကွပ်ထား
နောက်ဆုံးမှာ ဒေါသကို ကိုယ့်ရင်ထဲက ဖယ်ထုတ်လိုက်
သတ္တ၀ါအားလုံး ချမ်းသာပါစေ - ဒီလိုစတင်ပါတယ်
ကိုယ်က ချမ်းသာပါစေလို ပြောတိုင်း တခြားသူ ချမ်းသာမှာလား ...
ကိုယ့်မှာ ဒေါသထွက်နေရင် အနီးနားကလူ စိတ်မချမ်းသာတာ သေချာတယ် ...
ကိုယ့်မှာ ဒေါသငြိမ်းနေရင် ကိုယ်နဲ့ ဆက်ဆံနေရသူတွေက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပေါ်လာတယ်...
ဒါဟာ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင် ချမ်းသာတာပဲ
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ချမ်းသာတာကို တဖြည်းဖြည်းချဲ့သွားကြည့်လိုက်ပါ .... ဒါ မေတ္တာပွားတာပါပဲ..
သူတပါးချမ်းသာအောင် မေတ္တာပွားတဲ့အခါ တကယ်အကျိုး ချက်ချင်းခံစားရသူက မေတ္တာပွားသူ
ဒေါသဟာ စိတ်ကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ရောဂါ..
၂). အပြင်ထွက်မလာအောင် ဖိနှိပ်ထားရမယ်
သီးခံခြင်းတရားနဲ့ မေတ္တာတရားတို့ဟာ ဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်း တရား ပါရမီဆယ်ပါးမှာ ပါဝင်တယ်
သူတပါးဒုက္ခရောက်မှ ကြေနပ်ကြတယ် သူတပါး ဒုက္ခရောက်အောင်လည်း မရောက် ရောက်အောင်လုပ်တယ်
ဒေ၀ဒတ်နဲ့ သူ့ဖခင် အခုထိ အ၀ီစိမှာရှိနေသေးတယ်
ပထမသင်္ဂါယနာတင်ခဲ့တဲ့ သာသနာ့ ဒါယကာ အဇာတသတ်မင်း အခုထိ လောဟဂုမ္ဘီငရဲမှာ ရှိနေသေးတယ်
အဇာတသတ်ဟာ သောတာပန် ဖြစ်လုဆဲဆဲမှာ အပေါင်းအသင်း (Association) မကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် (Environment) မကောင်းတဲ့ အတွက် နိဗ္ဗာန်တံခါးကို မခေါက်နိုင်ခဲ့ဘူး မြတ်စွာဘုရား ဆီကို တရားနာ တစ်ခေါက် ရောက်ရဖို့ အရေး ဒိဌိဆရာတွေဆီကို ခြောက်ခေါက် ခေါ်သွားတာကို ခံခဲ့ရတယ် ဘ၀လမ်းကြောင်း ဖြောင့်ဖြူးဖို့ အတွက် အပေါင်းအသင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ သိပ်အရေးကြီးတယ်
အနှစ်ရှိတဲ့သူကို အနှစ်တွေပဲ ၀ိုင်းရံတာ
အနှစ်ရှိတဲ့သူကို နေရာမှာ အကာတွေပဲ ၀ိုင်းရံတာ
အကာရှိတဲ့ နေရာမှာ အနှစ်တွေပဲ ၀ိုင်းရံတာ
အကာရှိတဲ့ နေရာမှာ အကာတွေပဲ ၀ိုင်းရံတာ ဆိုပြီး ပရိသတ် လေးမျိုးရှိတယ်
ကိုယ်တိုင် အနှစ်မရှိတဲ့ အဇာတသတ်ဟာ အနှစ်မရှိသူတွေနဲ့ ပေါင်းမိပြီး အဖေကို သတ်မိတာပဲ
အလွန်ကောင်းတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေကို တစ်ကျပ်သားလောက် မေတ္တာပို့ရင် အလွန်ဆိုးတဲ့ လူဆိုးတွေကို တစ်ပိဿာလောက် ပို့ပေးရမယ်.. ဒါမှ မျှတမှာဖြစ်တယ်..
အပိုင်းအခြားမရှိတဲ့ မိခင်စိတ်နဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မေတ္တာပို့ပါ..
အိပ်ယာဝင် အိပ်ယာထချိန်လေးလောက် ပို့တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့
မေတ္တာပို့တဲ့ အခါမှာ- ရပ်နေတဲ့ အခါ၊ ထိုင်နေတဲ့ အခါ၊ သွားနေတဲ့ အခါ၊ လှဲနေတဲ့ အခါ လေးမျိုးလုံးမှာ မေတ္တာပွားနေခြင်းကို ဗြဟ္မာဝိဟာရ မြင့်မြတ်သော နေထိုင်ခြင်းလို့ ခေါ်တယ်..
မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာ ဘီလူးသရဲတွေကို နှင်ထုတ်ဖို့ မဟုတ်
ဘီလူးသရဲတွေထက် အလွန်ဆိုးသော မိမိရဲ့ဒေါသကို နှင်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်
ဒေါသစိတ်နဲ့ သွားနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ရန်သူနဲ့ ခရီးသွားနေတာပဲ ဖြစ်တယ်
ရင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဒေါသသည် မိမိရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော ရန်သူ
ဒေါသမျက်လုံးက အပေါ်ယံ မကောင်းတာလောက်ကိုပဲ မြင်တတ်တယ်
ဒေါသမပါသော မျက်လုံးက အပေါ်ယံအောက်က အကောင်းကို ရှာဖွေကြည့်မြင်တတ်တယ်
အကောင်းမြင်စိတ် နဲ့ မကောင်းမြင်စိတ် ဒီလိုကွာခြားတယ်
မိမိဒေါသကို ဖယ်ရှားပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို အကောင်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်
မကောင်းတာကို ဖယ်ကြည့်တတ်ဖို့ အထူးလိုအပ်တယ်
ဒေါသလျော့သွားတာနဲ့ အကောင်းတွေချည်းပဲ မြင်လာမယ်..
အားလုံးကို အကောင်းတွေပဲရွေး မြင်တတ်အောင် ကြိုးစားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် မေတ္တာတရား ထွန်းကားလာမယ်
ကိုယ်တိုင်လည်း မကောင်းမှုဆိုရင် နည်းနည်းမှ မလုပ်ကြနဲ့
သတ္တ၀ါအားလုံးတွေ ကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေ.. လို့ မေတ္တာပို့ရမယ်
ဘုံသုံးဆယ့်တစ်၊ ဖြစ်ဖြစ်များစွာ သတ္တ၀ါ၊ ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ်ပြည့်ပါစေ၊ ဘယာဝေး၍ အေးပါစေ...
နေ့ရောညရော မပျင်းမရိ မေတ္တာပွားနေတဲ့သူဟာ
ဘ၀မှာ မကောင်းတာမှန်သမျှ မမြင်ရတော့ဘူး
မျက်စိအောက်မှာ အကောင်းတွေချည်းပဲ မြင်လာကြားလာ ရတော့တယ်
နှလုံးသား အတွင်းပိုင်း စိတ်မှာလည်း အရည်အချင်း (၁၄)ပါး တိုးတက်လာမယ်
၁) လူစွမ်းကောင်း ဖြစ်လာမယ်
၃) အလွန့်အလွန် ဖြောင့်မတ်လာမယ်
၄) ပြောရဆိုရတာ လွယ်လာတယ် - ဒေါသ သမားကို ပြောရခက်တယ်
၅) ဆက်သွယ်ရတာ လွယ်လာတယ် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မျက်နှာမှာ အပြုံး မြင်ရတယ် ခြိမ်းခြောက် ဟိန်းဟောက်နေတာမျိုး မရှိတော့
၆) နူးညံ့ သိမ်မွေ့လာတယ်
၇) မာန် မာန မရှိတော့
၈) ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်သွားတယ် ပြုစုလုပ်ကျွေးရတာလည်း လွယ်လာတယ်
၉) သူ့အတွက် သူတပါးတို့ ဆောင်ရွက် တာဝန်ယူပေးရတဲ့ အရာ အရမ်းနည်းလာတယ်
ဒေါသ သမားကတော့ မရောင့်ရဲနိုင်လို့ သူ့အတွက် လုပ်ပေးရသူတွေ အရမ်းတာဝန်သင့်တယ်
၁၀) ကိုယ်ရော စိတ်ရော အမြဲပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိတယ်
ဒေါသ သမားက အမြဲစိတ်ထဲ လေးနေလိမ့်မယ်
၁၁) မျက်စိ နား နှာ ကိုယ်စိတ် အိန္ဒြရေ ရှိလာမယ်
၁၂) ရင့်ကျက်တဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ် ဒေါသ သမားက ပညာတုံးလာမယ်
၁၃) ကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါး တည်ငြိမ်လာမယ် ယဉ်ကျေးလာမယ်
၁၄) မေတ္တာသမားမှာ ချစ်သူကို ချစ်လို့ တွယ်တာခြင်း၊ မုန်းသူကို မုန်းလို့တွယ်တာခြင်း မေ့မရခြင်း မရှိတော့ဘူး
အခု ဖော်ပြထားတာတွေက တချို့တ၀က်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဆရာတော် ဟောကြားထားတာက အများကြီးပြည့်စုံပါတယ်
ဖော်ပြထားတာတွေမှာ တစ်ခုခု အမှားအယွင်းများပါရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ဘက်က ချွတ်ယွင်းချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်...
အမှတ်မလွဲရအောင် ဖတ်ပြီးသွားရင် တရားတော်ကို ရယူနာကြား စေချင်ပါတယ်
-"မေတ္တာတရား" တရားတော် - ရယူနာကြားနိုင်ရန်
Utilities On Web (1) - Gmail Password Recovery
Google Password Recovery
Gmail စကားဝှက်မေ့သွားတဲ့ အခါမျိုးတွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ ...
အဲဒီလို အချိန်မျိုးမှာ အတော်လေး စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ကြူံဖူးသူတိုင်း သိကြပါတယ်...
ဒီအခက်အခဲလေးကို Reactive Software ကထုတ်တဲ့ Google Talk Password Recovery ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးက ကူညီ ဖြေရှင်းပေးနိုင် ပါတယ်...
သူ့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျုတာတွေမှာ ရှိနေတဲ့ Google နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ GTalk, Google Toolbar, Gmail Notifier, Picasa2 အစရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်များ၊ IE(Internet Explorer)၊ Mozilla Firefox, Thunderbird စတဲ့ အင်တာနက်ကြည့်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေက သိမ်းဆည်းပေးထားတဲ့ Gmail စကားဝှက်တွေကို ပြန်ရှာပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီပရိုဂရမ်ဟာ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အနက်က အနည်းဆုံး တစ်ခုခုမှာ သိမ်း(Saved)ထားခဲ့ ဖူးတဲ့ စကားဝှက် တွေကိုသာ ပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်း ရှင်းပြ ထားတာကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ မူရင်းနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail, Gtalk စကားဝှက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျုတာတွေမှာ ပဲရှိနေပါတယ် ... (အကယ်၍ သိမ်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ အင်တာနက်ကြည့်ဆော့ဖ်ဝဲ IE နဲ့ Firefox တွေကို မှတ်ခိုင်းထားခဲ့မိတယ်ဆိုရင်)
နောက်တစ်နေရာ ကတော့ Google ရဲ့ GMail Server ပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်..
(Google ရဲ့ GMail Server ပေါ်က စကားဝှက်ကိုတော့ ဘယ်လို ပြန်ရှာလို့ရသလဲ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး၊ GMail Server တွေကို "ဟက်ခ်" နိုင်တဲ့ နည်းရှိချင်လည်း ရှိမှာပေါ့)
အခြားနည်းကတော့ Gmail Account ပြုလုပ်စဉ်က ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ Security Question ကနေတစ်ဆင့် မေးခွန်းကိုဖြေပြီး ပြန်ရှာတာ ဖြစ်ပါတယ်..
နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ GMail Account လုပ်တဲ့ အချိန်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဒုတိယ email လိပ်စာ (Secondary Mail Address) ကနေတစ်ဆင့် စကားဝှက်အသစ်တစ်ခု ပြန်တောင်းတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီနေရာမှာလည်း Gmail မှာကျွန်တော်တို့ Register လုပ်စဉ်က ထည့်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ ဒုတိယ email လိပ်စာ (Hotmail, Yahoo mail, etc.) ကိုမှတ်မိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်...
Gmail, GTalk password recovery:
File Info: EXE file, required space 357 KB
Home page: Link
Direct Download: Link
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကားဝှက် (၁) - Blog Post
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကားဝှက် (၂) - Blog Post
ညီအကို မောင်နှမ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး
အင်တာနက်ကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ အထိရောက်ဆုံး၊ အမြန်ဆုံးနဲ့ အကျိုးအရှိဆုံးအသုံးချပြီး လိုရာဆန္ဒများ ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ...
Google, Mihd.net & Blogspot
အင်တာနက်ထဲမှာ ရှိနေသမျှ အရာတော်တော်များများကို ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေကြီး Google ကရှာပေးနိုင်ပါတယ်..
သူ့ကို "ဘယ်လိုရှာခိုင်းရမလဲ" ဆိုတာနဲ့ "ရှာပုံရှာနည်း" လေးတွေကို သိဖို့ပဲလိုပါတယ်...
Google ရဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နဲ့ ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်တဲ့ အညွှန်း (Index) တွေရဲ့ အောက်မှာ အင်တာနက်ရဲ့ အတားအဆီးမရှိ အကန့်အသတ်မရှိမှု ဟာ ပိုမို ကျယ်ပြန့် လာပါတယ်...
အင်တာနက်ထဲမှာ ဖိုင်တွေသိုလှောင် သိမ်းဆည်းပေးနေတဲ့ အခမဲ့/အခပေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းပေါင်း များစွာရှိတဲ့ အနက် ကျွန်တော်တို့အတွက် အကောင်းဆုံး ၀က်ဆိုက်ဒ် တစ်ခုကတော့ -http://mihd.net ပဲဖြစ်ပါတယ်..
ဖိုင်သိမ်းဆည်းရေးဆိုက်ဒ်တွေထဲမှာ အင်တာနက် သုံးသူတွေအတွက် အဆင်အပြေဆုံး၊ ကန့်သတ်မှု အနည်းဆုံးနဲ့ ကြော်ငြာ အနည်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဲဒီနေရာကနေ ဒေါင်းလုဒ်ချရတာ အတော်လေး စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းပါတယ်... "ကမ္ဘာ့ အရက်ရောဆုံး ဖိုင်သိမ်းဆည်းရေး ၀န်ဆောင်မှု" (MiHD.net World's most generous filehosting service) လို့ ပြောထားတာ နဲ့ ကိုက်ညီတာ အမှန်ပါပဲ ...
(Rapidshare တို့နဲ့များ ကွာချက်ကတော့ဗျာ.. )
သူတို့ရေးထားတဲ့ ဖော်ပြချက်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ...
ဒေါင်းလုဒ်ချနေရင်း အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတာမျိုး ရှိခဲ့ရင်လည်း အစကနေ ပြန်စလို့ ရပါတယ်.. Resumable downloads!
ဒေါင်းလုဒ် မန်နေဂျာ စတဲ့ ဖိုင်တွေ ဒေါင်းလုဒ်ချတဲ့ အခါ ပိုမြန်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ သုံးခွင့်ပြုထား ပါတယ်.. Download accelerators are allowed.
တစ်နေ့ မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပဲ ဒေါင်းလုပ်လို့ရမယ် စတဲ့ နေ့စဉ်ကန့်သတ်ချက်တွေ၊ Rapidshare လို အချိန်နာရီ ကန့်သတ်ချက်တွေ မရှိပါဘူး.. No daily/hourly download limitations.
ဘယ်သူဘယ်ဝါ၊ ဘယ်တိုင်းပြည်ကိုတော့ ဒေါင်းလုဒ်ခွင့်မရှိဘူး ဆိုပြီး ကန့်သတ် ထားတာမျိုးလည်း မလုပ်ပါဘူး.. We do not block users by country or IP.
ဖိုင်တွေကို အပိုင်းလိုက် ခွဲပြီးတင်တာကိုလည်း လက်ခံပါတယ်... Split archives are allowed! (and encouraged)
ဖိုင်တစ်ခုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်နှမိနစ်စောင့်ရမယ် ဆိုတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး.. No waiting foradownload to start (no timers, countdowns etc).
သူတို့ဆီကနေ ဖိုင်တွေဒေါင်းလုဒ်ချဖို့ ဖိုင်တွေတင်ဖို့ အတွက် ဘာဆော့ဖ်ဝဲမျိုးကိုမှလည်း ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျုတာတွေမှာ ထည့်ပေးစရာ မလိုပါဘူး ... အင်တာနက် သုံးနိုင်တာနဲ့ ဖိုင်တွေတင်တာ၊ ဒေါင်းလုဒ်ချတာ လုပ်လို့ရပါတယ်.. Our users dont have to install anything to download their files (no toolbars, spyware etc)
မှတ်ချက်- MiHD.net ရဲ့နောက်မှာ ကပ်လိုက်နေတာကတော့ www.mediafire.com ပါ..
Google ကနေဖန်တီးပေးထားတဲ့ အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများစွာအနက် ဘလော့ခ်ဂါ (Blogger) နဲ့ Blogspot တွေဟာ လူတိုင်းကို ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက်ဆိုက်ဒ်လေးတွေ အလွယ်တကူ ဖန်တီး လာနိုင်အောင် လုပ်ပေးထား ပါတယ်... ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘလော့ခ်ဂါ အများစုဟာ အင်တာနက်ကနေ ရှာဖွေ တွေ့ရှိလာသမျှတွေကို မိမိတို့ရဲ့ ဘလော့ခ်တွေကနေ တစ်ဆင့် ပြန်ပြီး ဝေမျှပေးနေကြတာဟာ အတော်လေးကို ကြေနပ် အားရစရာ ကောင်းပါတယ်.. နည်းပညာတွေ၊ စာအုပ်တွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲတွေနဲ့ အခြားသော အကျိုးဖြစ်မယ့် အကြောင်းအရာ တွေကို ဘလော့ခ်တွေကနေ ရှာဖွေရယူလို့ ရပါတယ်..
ကျွန်တော်က အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အရာသုံးခုကို အခုလို အသုံးချပါတယ်...
နမူနာလေးတွေကို စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ.. နှိပ်ကြည့်လို့အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ် ...
Google ရဲ့ Search box မှာ-
အခုလို ရှာချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Google မှာထည့်ရှာလိုက်တဲ့ အခါမှာ ဘလော့ခ်ဂါတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ခ် တွေကနေတဆင့် ရှာဖွေ ဝေမျှထားတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို MiHD.net ကနေတစ်ဆင့် ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ၊ ဘလော့ခ်တွေ ရလာတာပါပဲ...
mihd.net နေရာမှာ rapidshare.com. mediafire.com, box.net, စသည်ဖြင့် ဖိုင်သိမ်းဆည်းရေး ဆိုက်ဒ်တွေ ပြောင်းထည့် လို့ရပါတယ်
*.blogspot.com နေရာမှာ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ ဆိုက်ဒ်နာမည် dl4all.com, avaxhome.ru, softex.meganet.lt စသည်ဖြင့် ရှာချင်တဲ့ ဆိုက်ဒ်နာမည် ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်..
book, pdf, chm, mp3, wma, zip, exe စတဲ့ သော့ချက် စကားလုံးတွေနဲ့ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကိုတော့ လိုသလို ထည့်သွင်း ရှာဖွေ သွားနိုင်ပါတယ်..
mediafire.com+windows vista site:*.blogspot.com
ဆိုက်ဒ်လိပ်စာတွေမသိလို့ MiHD.net ပါတဲ့ အင်တာနက်နေရာ ရှိသမျှကို လိုချင်ရင်တော့
ပြီးတော့မှ Google ကနေ ရလာတဲ့ အဖြေတွေထဲက
လိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေကို ပြန်ရှာလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်..
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် (Related Posts) -
How to Download From MiHD
PDF File Download & MiHD.net
Thanks for my great friends: Google, MiHD.net & Blogger, also all Bloggers who are sharing what they found from the net, for this post. ;) =)) ...
အညွှန်း - Google ကို အသုံးချခြင်း Using Google, Help, mihd.net, ဘလော့blog
ဒုလ္လဘတရား ငါးပါး-5Difficult Things To Get
ဒီနေ့ဟာ - မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၉ ခုနှစ်၊ ၀ါခေါင်လပြည့်ကျော် (၈)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်...
“ဒုလ္လဘတရား ငါးပါး” တရားတော်ပါ...အကြောင်းအရာ အချို့ကို ထုတ်နှုတ် ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ...
ဘုရားအဖြစ်ဟာ ရဖို့ခက်ခဲသည် ...
ဘုရားတစ်ဆူ ပွင့်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲသည် ...
ဘုရားဖြစ်သည့် အကျင့်မျိုးကို ကျင့်ရန် အလွန်ခက်သည် ...
ဘုရားအဖြစ်ရဖို့ ခက်ခဲကြောင်း ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် အကြိမ်ကြိမ်ဟောကြားခဲ့သည်...
ဘုရားဖြစ်ချင်ကြောင်း စိတ်မှ ကြံစည်၍ လာခဲ့ရသည်က ၇ သင်္ချေ
ဘုရားဖြစ်ရပါလို၏ဟု နှုတ်မှ ဆုတောင်းလာခဲ့ရသည်က ၉ သင်္ချေ
ဗျာဒိတ်ရသည့်အချိန်မှစ၍ ဘုရားဖြစ်သည်အထိ ပါရမီဖြည့်ကျင့်ရသည်က ၄ သင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း
ဖြစ်ကြောင်း သီဟိုကျမ်းများ တွင်ဖော်ပြထားသည်...
ကောင်းမှုတွေကို သတ္တ၀ါတွေ ကြောက်တယ် ...
လောဘကြောင့် (လောဘတကြီးရှာကြခြင်းကြောင့်) အငတ်ဘေးဆိုက်ရသည်..
မစ္ဆရိယကြောင့် (လောဘကြောင့် ရထားသော ပစ္စည်းများကို သူတပါးအား ဝေမပေးချင် ခြင်းကြောင့်) အငတ်ဘေးဆိုက်ရသည်..
အငတ်ဘေးကို ကြောက်ကြသော်လည်း အငတ်ဘေးဆိုက်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သော လောဘကို မသတ်နိုင်ကြ...
အငတ်ဘေးကြောက်သလို လောဘကို ပယ်ဖို့လည်းကြောက်နေကြသည် ...
လောဘကို တကယ်ပယ်ချင်ရင် တကယ် တရားအားထုတ်ကြ...
မစ္ဆရိယကို တကယ်ပယ်ချင်ရင် တကယ် တရားအားထုတ်ကြ...
လောဘတဏှာပယ်ဖို့ရန် ဒုက္ခသစ္စာကို မြင်အောင် ရှုမှတ်ပွားများ အားထုတ်ရသည်..
နာရုံသာနာ မရှုပွားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်က လောကမှာ တကယ်များသည်...
အမြဲတမ်း ကမ္မဌာန်းထိုင်သူ ယောဂီမြို့တစ်မြို့မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ
သတ္တ၀ါတွေဟာ ရုပ်အဆင်းကြည်ညိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က များသည်
အသံနဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို ကြည်ညိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က များသည်
ခေါင်းခေါင်းပါးပါး ခြိုးခြိုးခြံခြံအကျင့်များကို ကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က များသည်
တရား တကယ်ကြည်ညိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ရှိသမျှ သတ္တလောကကြီးကို အပုံတစ်သိန်းပုံလျှင် တစ်ပုံသာရှိသည်ဟု ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့သည်...
သံသရာတွင် ချမ်းသာချင်လျှင် စွန့်လွှတ်ရမည်..
မြင့်မြတ်သူ အထက်တန်းကျသူတို့၏ လုပ်ငန်းသည် ပါရမီ...
ပေးစွန့်ခြင်းသည် လောဘနှင့် မစ္ဆရိယကို စွန့်ခြင်းဖြစ်၍ ပါရမီ...
လက်ညှိုးတစ်ချောင်း ပေးပါဆိုလျှင် မပေးနိုင်...
လက်ညှိုးနှင့် လက်မောင်း - လက်ညှိုးကိုပေးမည်...
ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းကျလေ စွန့်လွှတ်ဖို့ ခက်ခဲလေလေ...
ပညာလွန်ကဲသော ဘုရားလောင်းများ ၄ သင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း မရပ်မနားအားထုတ် ကျင့်ကြံရသည်...
သဒ္ဒါလွန်ကဲသော ဘုရားလောင်းများ ၈ သင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း မရပ်မနားအားထုတ် ကျင့်ကြံရသည်...
၀ီရိယလွန်ကဲသော ဘုရားလောင်းများ ၁၆ သင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း မရပ်မနားအားထုတ် ကျင့်ကြံရသည်...
သူတော်ကောင်း အလုပ်ဆိုတာ ပျော်နိုင်ခဲသည်...
ကောင်းမှုမှန်ရင် ချန်မထားနဲ့ ....
လက်လှမ်းမှီသမျှ ကောင်းမှုကို လုပ်ကြ (ဘုရားလောင်းများသာ တကယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်)
ကြာကြာအားထုတ်၊ များများအားထုတ် ၊ မနေမနားအားထုတ်၊ လေးလေးစားစား အားထုတ်၊ ပျော်ပျော်ပါးပါး အားထုတ်ရမည် ပွားများရမည်...
ပျော်ပျော်ပါးပါး အလုပ်လုပ်ဖို့ အတော်ခက်သည်...
ဘုရားရှင်တို့သည်- စရိယ ၃ ပါး၊ စွန့်ခြင်းကြီး ၅ ပါး၊ ပါရမီ ၃၀၊ ဘာဝနာ ၅ ပါး တို့ကို ဘုရားရှင်တိုင်း ဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့ ကြသည်...
ထို့ကြောင့် ဘုရားအဖြစ်ကိုရရန် ခက်ခဲသည်...
ထို့ကြောင့် ဘုရားသာသနာ ခေတ်တစ်ခေတ်ဖြစ်ရန် ပိုခက်သည် ...
ထို့ကြောင့် ဘုရားသာသနာ ခေတ်တစ်ခေတ် တွင်လူဖြစ်ရန် ပိုခက်သည် ...
ထို့ကြောင့် ဘုရားသာသနာ ခေတ်တစ်ခေတ် တွင် သာသနာကို ကြည်ညိုသောလူ၊ မှီခိုခွင့်ရသူ ဖြစ်ရန် ပိုခက်သည် ...
ထို့ကြောင့် ဘုရားသာသနာ ခေတ်တစ်ခေတ် တွင် သာသနာကို ကြည်ညိုသောလူ၊ မှီခိုတတ်သောသူ ဖြစ်ရန် ပိုခက်သည် ...
တချို့တွေက ကြည်ညိုသော်လည်း မမှီခိုတတ်၊ တချို့တွေက မှီခိုနေသော်လည်း မကြည်ညိုတတ်...
လုမ္ဗိနီကို မှီခို၍ အလုပ်ဖြစ်နေကြသော ဘာသာခြားများ၊ မှီခိုနေကြသော်လည်း မကြည်ညိုကြသူများ...
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အားထုတ် လေ့ကျင့်နေရုံနဲ့ မပြီးတော့...
လှုတန်းနေကာမျှဖြင့် ဘာသာရေးဆိုတာ မပြည့်စုံနိုင်...
ဘုရားသာသနာတွင် ငရဲကျနေသော သူများသည် ဘုရားကို ကြည်ညို မှီခိုခွင့်မရ...
လူ့ငရဲ ရောက်နေသောသူများကား ကြည်ညိုသော်လည်း မှီခိုခွင့် မရကြ...
(ဥပမာ- ပြစ်မှုကျုးလွန်၍ အကျဉ်းကျနေသူများ)
ကြည်ညိုခွင့်လည်းမရ မှီခိုခွင့်လည်းမရတာက တကယ့် ငရဲသားတွေ...
သာသနာတော်ကို ကြည်ညိုသောသူ၊ မှီခိုသောသူမှ ရခဲသော လူ့ဘ၀ ရသည်မည်၏...
ငတ်နေသောထမင်းကို ဓမ္မအရသာဖြင့် ဖြေဖျောက်သော ပြိတ္တာမ...
ပြိတ္တာမ လောက်တော့ ဇွဲကောင်းကြဖို့ လိုအပ်သည်...
မြစ်ကမ်းပါးမှ ရေတောင်းနေသော ပြိတ္တာများ...
ပါးစပ်ထဲရေမ၀င်အောင် ပိတ်ထားတဲ့ လောဘနဲ့ မစ္ဆရိယ...
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ပေးတိုင်းမကျေနပ်နိုင်လို့ အဆာမပြေတဲ့ လူပြိတ္တာများ သာသနာတော်ကို ကြည်ညို မှီခိုခွင့်မရကြသူများ ရှိနေသည်...
လူမှာ စားဖို့ ၊အိပ်ဖို့ ၊ ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့လောက်သာ သိရင် လူတိရိစ္ဆာန် ခေါ်သည်...
ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ တစ်ဘ၀စာ ဇိမ်ခံဖို့ စဉ်းစားသူတွေ ပိုများလာသည်...
ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါး မရှိတဲ့ အရပ်ကို ပစ္ဆန္တရစ် အရပ်ဟုခေါ်သည်...
ထိုအရပ်တွင် လူဖြစ်ရလျှင် လူဖြစ်ရကျိုးမနပ် ...
ဆွမ်းခံဘုန်းကြီးကို သူတောင်းစားပုဒ်မနှင့် ရုံးတင်တရားစွဲသော မြို့လန်ဒန် ...
သံဃာကို သံဃာမှန်း မသိတဲ့ အရပ်သည် ပစ္ဆန္တရစ် အရပ် ...
သူတော်ကောင်းတရားကို စနစ်တကျ မှန်ကန် ပြည့်စုံစွာ လေ့လာ ဆည်းပူး လေ့ကျင့်အားထုတ် နိုင်ရန်လိုသည်...
အရပ်ကောင်း ၊ ဆရာသမားကောင်း၊ တရားကောင်း၊ အကျင့်ကောင်း၊ စိတ်ကောင်း များရရှိ ကျင့်သုံး နိုင်ဖို့လိုသည်....
မွေးဖွားစဉ်ကပင် ရူးသွပ် ဆွံ့အ လာသူများသည်လည်း လူဖြစ်ရကျိူးမနပ် တရားအားမထုတ်နိုင် တရားမနာနိုင်...
သာသနာတော် ထွန်းကားချိန်တွင် လူဖြစ်လာရသော ရခဲလှသော ဘ၀...
သူတော်ကောင်းတရား မပျောက်မပျက်အောင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် ခက်ခဲသည်...
သူတော်ကောင်းတရား နှုတ်တက်ရအောင်ဆောင်သူရှိရန် ခက်ခဲသည်...
သူတော်ကောင်းတရား နှုတ်တက်ရအောင်ဆောင်၍ ပြန်လည်ဟောကြားသူရှိရန် ခက်ခဲသည်...
သူတော်ကောင်းတရား ပြန်လည်ဟောကြားခွင့်ရရှိရန် ခက်ခဲသည်...
သူတော်ကောင်းတရား နာကြားရရန် အလွန့် အလွန်ခက်ခဲသည်...
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ကျယ်ပြန့်သော တရားပွဲမျိုး လုပ်ခွင့်မရှိ...
ပီနန်ကျွန်းရှိ ၈၀% သော ဗုဒ္ဓဘာသာများ တရားပွဲကြီးများ လုပ်ခွင့်မရကြ...
သူတော်ကောင်းတရား နာကြားရ သော်လည်း ကျင့်ခွင့်ရရန် ခက်ခဲသည်...
ရဟန်းအဖြစ်ကို ရရန် ခက်ခဲသည်...
ရဟန်းတော်များ ကျင့်သလို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိက္ခာသုံးပါး ရအောင်လေ့ကျင့်ရန် ခက်ခဲသည်...
သူတော်ကောင်းတရား နာကြားရ သော်လည်း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိက္ခာသုံးပါးဆောင်သော ရဟန်းအဖြစ်ရရန် အလွန့် အလွန်ခက်ခဲသည်...
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အားနည်းလာလျှင် သာသနာတော်ကို မှီခိုခွင့် နည်းလာမည်...
သာသနာတော်၏ အနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်း အရဟတ္တမဂ်၊ အရဟတ္တဖိုလ် သို့ရောက်အောင် သွားရမည်.. အားထုတ်ကြရမည်...
ဘုရားပွင့်သောခေတ်တွင် လူအဖြစ်ကို ရခဲ၏...
သာသနာတော်ကို ကြည်ညို မှီခိုတတ်သူ အဖြစ်ကို ရခဲ၏...
သူတော်ကောင်းတရား နာယူခွင့်ရရှိရန် ရခဲ၏...
သာသနာတော်တွင် ရဟန်းတပါးဖြစ်ရန်၊ (သာသနာတော်၏ အကျင့်ကို ကျင့်ရန်) ရခဲ၏ ...
သာသနာတော်နှင့် ကြုံခိုက် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အလုပ်များကို မမေ့မလျော့သော သတိဖြင့် ကြိုးစား အားထုတ်သွားကြရမည်...
-"ဒုလ္လဘတရား ငါးပါး" - ရယူနာကြားနိုင်ရန်
ဤတရားတော်ကို နာကြား ရေးမှတ်နေရင်း
အမိမြန်မာပြည်တွင် လူဖြစ်ခွင့်ရခြင်း၊ နေထိုင်ခွင့်ရခြင်း၊ ရတနာသုံးပါးကို စိတ်ရှိတိုင်း ကြည်ညိုကိုးကွယ်ခွင့် ရရှိခြင်းများ အတွက် ဖော်ပြ၍မရနိုင်သည့် ၀မ်းသာပီတိတစ်မျိုးခံစားရရှိမိပါကြောင်း ....။
(ဒုလ္လဘတရား ငါးပါးကို5Difficult Things To Get ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ထားတာ မှားနေရင် သိတဲ့သူ ပြင်ပေးသွားကြပါ..။)
အီးဘွတ်ခ် - ဒီဂျစ်တယ် အခြေခံများ
"ဒီဂျစ်တယ် အခြေခံများ" ဆိုတဲ့ "သောမတ်စ် အယ်လ် ဖလွိုက်" ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို မှတ်စုပြန်ထုတ်ထားတဲ့ ပါဝါပွိုင့် ဖိုင်များဖြစ်ပါတယ်..
ရှစ်ကြိမ်မြောက် ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်...
ဒီဘာသာရပ်ဟာ အီလက်ထရောနစ် ကျောင်းသားတွေနဲ့ အိုင်တီကျောင်းသားတွေ မလွဲမသွေ လေ့လာ သင်ယူကြရတဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ် တစ်အုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်...
ဖိုင်တွေကိုတော့ "တိုင်ဝမ် - ယွန်ဇီ တက္ကသိုလ်" ကနေ ယူပြီး ပြန်တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်...
အခန်းပေါင်း (၁၅)ခန်း၊ ဆလိုက်ပေါင်း ၁၂၉၉+၃၇ ခု ပါရှိပါတယ်....
အဲဒီကျောင်းမှာ ရက်သတ္တပတ် (၁၆) ပတ်၊ ဆီမက်စတာ (၂) ခု သင်တဲ့ ဘာသာရပ် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်...
အချက်အလက်များ - ဇစ်ဖိုင် ၊၄၉ မီဂါဘိုက်၊ ရယူရန်
Thanks for my great friend: Google for this post. ;) =)) ...
အညွှန်း - ကျွန်တော်နှင့် အီလက်ထရောနစ်, စာအုပ် eBooks
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း ရောင်းရင်းများအတွက်
အနောက်တိုင်းသီချင်းတွေ အများကြီး ဒေါင်းလုဒ်လို့ ရနိုင်တဲ့၊ မှတ်ပုံတင်စရာလဲ မလိုတဲ့
အင်တာနက်ထဲက နေရာလေးတစ်ခုကို ညွှန်းချင်ပါတယ် ...
တချို့ ဖိုင်တွေက ဒေါင်းလုဒ်လိုက်တဲ့အခါ ".rbs" ဆိုတဲ့ extension တွေနဲ့ ဖြစ်နေမှာပါ..
အဲဒီဟာလေးကို ဖျက်ပြီး ".mp3" လို့ပြောင်းပေးလိုက်ရင် နားထောင်လို့ရပါပြီ....
အညွှန်း - music, အပန်းဖြေအနားယူရအောင် Relaxation Zone
မန္တလေးပြင်ဦးလွင် ကားလမ်းအနီး ရွာများ ဆည်ရေတိုး၍ ဒုက္ခရောက်ကြ
မန္တလေးတိုင်းပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ဆည်တော်လေးဆည်ရေလျှံမှုလို့ပြည်တွင်းဂျာနယ် များတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ လူ၂ဦးသေဆုံးတယ်လို့စာရင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် လူများချက်ပြုတ်စားစရာ အိုးခွက်ပုဂံကိုမရှိပဲ ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ် နေကြပါတယ်။
အဆိုပါကျေးရွာများအနက် ဆင်းရဲဆုံးဖြစ်သော ဂိုက်တန်းရွာသည် ရေထဲပါသွားသော အိမ်ခြေ ၁၅၃ အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားဦးရေ ၁၄၅ ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာအ၀တ်အစားမှမရလိုက်ပါဘူး။ ကိုယ်လွတ် ပြေးလာခဲ့ရပါတယ်။
အခုလောလောဆယ် တော့လူတွေ ဆန် နို့်ဆီဗူး ၁ ဗူးမှ ၄ ဗူးအထိလာလှူနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ သူတို့အတွက် အ၀တ်အစား အဓိက လိုအပ်နေပါတယ်။ ကလေးငယ်များအတွက် ကျောင်းသုံ စာရေးကိရိယာများ လိုအပ်နေပါတယ်။ စာသင်ခုံများလိုအပ်ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့(2010 - အောက်တိုဘာ - 4) ကို ဦးဇင်းတို့ကြွရောက်လှူဒါန်းကြပါမည်။ ပါဝင် လှူဒါန်းလိုသူများ အရှင်ကောဝိဒသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။
Source - http://kovida.multiply.com/photos/album/209/209
Ashin Kovida's Activities
အနာဂါတ် မြန်မာ့မျိုးဆက်များ အတွက်
ကျွန်တော်တို့ထက်ပို၍ လွယ်ကူ လျင်မြန် ပြည့်စုံစွာ လေ့လာ နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည် စုဆောင်းပြုစုနေပါသည် ...
မည်သည့် သတင်းသမားများ မဆို၊ အိုင်တီအကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေကို မဆို ကျွန်တော်တို့က တံခါးဖွင့်ထားသည်။ အမြဲ လက်ကမ်းကြိုနေမည်သာ ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတော့ရှိသည် "ငါ ဘာမှမဟုတ်" ဆိုသည့် မူဖြင့် လာတက်ပြီး အကြံကောင်းများ မျှဝေကြရန်သာ ဖြစ်သည်။
Messages from Lovely Friends
e Books for Engineers, Web Developers, Hackers & ....
Disclaimer: All the files and Download Links on this site are collected from
Search Engines' Results.
The posters are just sharing what they found on net.
Use all the links with your own risk & native Copyright Laws.
~~~ thank you very much for visiting our sharing place ~~~